गण्डकी प्रदेशमा बजेट खर्च निराशाजनक, स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १७ प्रतिशत | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार गण्डकी प्रदेशमा बजेट खर्च निराशाजनक, स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १७ प्रतिशत
on: May 18, 2019 प्रदेश समाचार, प्रदेश-गण्डकी
जेठ ४, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा विनियोजन गरेको बजेट खर्च र कार्यप्रगति निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको १० महीना बितिसक्दा प्रदेश सरकारले जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
सरकारले विनियोजन गरेको पूँजीगततर्फको रू. १५ अर्ब ९० करोड बजेटमध्ये हालसम्म रू. २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले खर्च गरेको यो रकम पूँजीगत तर्फको १६ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै हो ।
प्रदेश अन्तर्गतको विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सहभागी रहने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समेत खर्चदर निकै न्यून देखिएको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा छुट्टाइएको रू. १० अर्ब ४९ करोड पूँजीगत बजेटमध्ये रू. २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै रू. १ अर्ब ४१ करोड बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले रू. ६९ करोड निकासा पाएको छ । रू. १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयले रू. १२ करोड ६४ लाख मात्र खर्च गरेको छ ।
खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा सबैभन्दा कमजोर सामाजिक विकास मन्त्रालय देखिएको छ । सामाजिक विकासले बजेटको ४ प्रतिशत खर्च गर्दा कृषि मन्त्रालयले ५, आन्तरिक मामिलाले ८, उद्योग पर्यटनले ९, भौतिक पूर्वाधारले २२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय छ । यस कार्यालयले ८३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ । दोस्रोमा प्रदेशसभाले ७३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अहिलेसम्म ५६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले २६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
बजेट धेरै हुने मन्त्रालयको खर्च कमजोर देखिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख जयराम पौडेलले बताए । ‘धेरै रकम खर्च गरेको देखिएका कार्यालयहरुको बजेट आकार नै सानो छ’ उनले भने । ‘सानो बजेट भएका कार्यालयले लगभग काम गरिसकेका छन् । पूँजीगत खर्चका आधारमा सरकारको कार्यक्षमता मूल्यांकन हुन्छ ।’
आर्थिक वर्ष सकिन २ महीना मात्रै बाँकी छ । यो बीचमा विकास खर्च कम्तिमा ५० प्रतिशत पु¥याउने सरकारको योजना छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अधिकांश कार्यक्रममा कर्मचारी अभावले बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारले १० महीनाको अवधिमा करीब रू. ५ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । संघ र स्थानीय सरकारको साझा शीर्षकका करसहित प्रदेश सरकारले रू. ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । यसमा सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धी करबाट बाँडफाँट भई आउने रकम रू. २ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ । अन्तशुल्कबाट रू. ७८ करोड ४१ प्राप्त भएको छ । प्रदेशले सवारी साधन करबाट रू. ४३ करोड र घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट रू. १९ करोड ७६ लाख संकलन गरेको छ ।